OTU ESI AGBA ỌSỌ "NYE IWU NGWA NGWA" DIKA ONYE NCHỊKWA NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Gaa "Iwu ahụ Kwụsị" dịka onye nchịkwa na Windows 10
"Iwu Iwu" - otu akụkụ dị mkpa nke usoro sistemụ ọ bụla nke ezinụlọ Windows, na iri iri abụghị ụdị. Site na ọnye a, ị nwere ike ijikwa OS, ọrụ ya, na ihe ndị mejupụtara ya site na itinye na imezu iwu dịgasị iche iche, ma imezu ọtụtụ n'ime ha, ịkwesịrị ịnwe ikike nchịkwa. Ka anyị gwa gị otu esi mepee ma jiri "eriri" ndị a.
Hụkwa: Otu esi agba ọsọ "Iwu Iwu" na Windows 10
Gbaa "Iwu Iwu" yana ikike nhazi
Nhọrọ Nhọrọ Ntanetị "Iwu iwu" na Windows 10, enwere ole na ole, a na-atụle ha niile n'isiokwu dị na njikọ dị n'elu. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ịmepụta mpaghara a nke Os na nnọchite onye nchịkwa, enwere naanị anọ n'ime ha, ọ dịkarịa ala, ma ọ bụrụ na ị gbalịghị ịmegharị ụkwụ. Onye ọ bụla na-eji ya eme ihe n'ọnọdụ.
Usoro 1: Malite NchNhr
Na nsụgharị niile dị ugbu a ma ọ bụdị na-adịbeghị anya nke Windows, ịnweta ọtụtụ ngwaọrụ na ngwaọrụ nke usoro nwere ike nweta site na menu. "Malite". N'elu iri nke iri, ngalaba Os nke a agbakwunyere na ihe omume a na-ekwu, ekele nke a na-edozi ọrụ anyị nke taa na ntinye ole na ole.
Hụ na akara ngosi menu "Malite" wee pịa ya nri (nri nri) ma ọ bụ pịa ya "Nweta + X" na keyboard.
Na ndokwa menu nke na-egosi, họrọ "Iwu iwu (ha)"site na ịpị ya na bọtịnụ òké aka ekpe (LMB). Kwenye ebumnuche gị n'ime windo njikwa akaụntụ site na ịpị "Ee".
"Iwu Iwu" a ga-ebido n'aha onye nchịkwa ahụ, ị ​​ga-enwe ike iji aka gị rụọ ọrụ ndị dị mkpa na usoro ahụ.
Hụkwa: Otu esi gbanyụọ njikwa akaụntụ njikwa na Windows 10
Mwepụta "Iwu iwu" ya na ikike onye nchịkwa site na menu ndokwa "Malite" bụ nke kachasị mfe na ngwa ngwa iji mezuo, dị mfe icheta. Anyị ga-atụle nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ime.
Usoro 2: Chọọ
Dịka ị maara, na mbipụta nke iri nke Windows, usoro nyocha ahụ edozila kpamkpam ma bụrụ nke a kwadoro nke ọma - ugbu a ọ dị mfe iji ma mee ka ọ dị mfe ịchọta ọ bụghị naanị faịlụ ndị ị chọrọ, kamakwa akụkụ dị iche iche software. Ya mere, iji nyocha ahụ, ị ​​nwere ike ịkpọ gụnyere "Iwu Iwu".
Pịa bọtịnụ nchọta na taskbar ma ọ bụ jiri nchịkọta hotkey "Nweta + S"akpọ otu os nke os.
Tinye n'ime nchọta ọchụchọ ahụ "cmd" enweghị nzacha (ma ọ bụ malite edemede "Iwu Iwu").
Mgbe ị na-ahụ akụkụ nke sistemụ arụmọrụ nke mmasị na ndepụta nke nsonaazụ, pịa nri na ya wee họrọ "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta",
mgbe nke a gasịrị "Eriri" A ga-eji ikikere kwesịrị ekwesị na-ebido.
N'iji ngwa a wuru na Windows 10, ị nwere ike n'ụzọ nkịtị na ntinye ntanetị na bọtịnụ keyboard na-emeghe ngwa ọ bụla ọzọ, ma usoro nke usoro na onye ọrụ.
Nzọụkwụ 3: Gbaa windo
Enwere nhọrọ nhọrọ dị mfe. "Iwu Iwu" n'ihi onye nchịkwa karịa atụle n'elu. Ọ na-etinye aka n'akwụkwọ mkpesa ahụ Gbaa ọsọ na iji ngwakọta nke igodo dị ọkụ.
Pịa na keyboard "Nweta + R" imeghe akụrụngwa nke mmasị anyị.
Tinye iwu n'ime yacmdmana egbula ka ị pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Jide igodo "CTRL + SHIFT" na, na-ahapụghị ha, jiri bọtịnụ ahụ "OK" na windo "Tinye" na keyboard.
Nke a bụ eleghị anya ụzọ kachasị mfe na nke kachasị ọsọ na-agba ọsọ. "Iwu Iwu" na ikike nke Onye Nchịkwa, ma maka mmejuputa ya dị mkpa icheta ụzọ mkpirisi dị mfe.
Hụkwa: Ụzọ mkpirisi keyboard maka ọrụ dị na Windows 10
Nzọụkwụ 4: Njikwa ngwụcha
"Iwu Iwu" - Nke a bụ usoro mmemme, ya mere, ị nwere ike ịgba ọsọ ya dịka ọ bụla ọzọ, nke kachasị mkpa, mara ebe nke faịlụ ahụ. Adreesị nke ndekọ nke cmd dị na-adabere na bitation nke sistemụ arụmọrụ ma yiri nke a:
C: Windows SysWOW64- maka Windows x64 (64 bit)
C: Windows System32- maka Windows x86 (32 bit)
Detuo ụzọ kwekọrọ na bit omimi arụnyere na kọmputa gị Windows, mepee usoro "Explorer" ma kpoo uru a n'ime akara n'elu panel ya.
Pịa "Tinye" na keyboard ma ọ bụ na-atụ aka na akụ aka nri na njedebe nke akara iji gaa ebe a chọrọ.
Pịgharịa gaa na ndekọ ahụ ruo mgbe ịhụ faịlụ aha "cmd".
Rịba ama: Site na ndabara, faịlụ niile na nchekwa dị na SysWOW64 na ndekọ System32 na-egosi n'usoro mkpụrụ edemede, ma ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, pịa na taabụ "Aha" na n'elu mmanya iji dozie ọdịnaya nke mkpụrụ akwụkwọ.
Mgbe ịchọta faịlụ ahụ dị mkpa, pịa aka nri na ya ma họrọ ihe dị na menu "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
"Iwu Iwu" a ga-ebute ya na ikike kwesiri ekwesighi.
Ịmepụta ụzọ mkpirisi maka ịnweta ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ị na-arụkarị ọrụ "Iwu iwu"Ee, ọbụnakwa na ikike onye nchịkwa, maka ohere ngwa ngwa na nke dị mfe karị, anyị nwere ike ikwu na ịmepụta ụzọ dị mkpirikpi nke usoro a na desktọọpụ. A na-eme nke a dị ka ndị a:
Tinyegharịa nzọụkwụ 1-3 nke akọwapụtara na usoro gara aga nke isiokwu a.
Right pịa na faịlụ a na-arụ ọrụ "cmd" ma n'aka nke ya họrọ ihe ndị dị na menu "Zipu" - "Desktọpụ (mepụta ụzọ mkpirisi)".
Gaa na desktọọpụ, chọta ụzọ mkpirisi kere n'ebe ahụ. "Iwu iwu". Pịa aka nri na ya ma họrọ "Njirimara".
Na taabụ "Ụzọ mkpirisi"nke a ga-emeghe site na ndabara, pịa bọtịnụ. "Di elu".
Na windo ahụpụta, lelee igbe dị n'akụkụ "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta" wee pịa "OK".
Site ugbu a gaa n'ihu, ọ bụrụ na i jiri ụzọ dị mkpirikpi kere na desktọọpụ iji malite cmd, ọ ga-emeghe na ikike onye nchịkwa. Imechi windo "Njirimara" ụzọ mkpirisi kwesịrị pịa "Tinye" ma "OK", ma adịghị ọsọ ime ya ...
... na windo ogwe ụzọ windo, ị nwekwara ike ịkọwa njirimara ụzọ dị mkpirikpi. "Iwu iwu". Iji mee nke a na taabụ "Ụzọ mkpirisi" pịa ubi n'uzo aha "Oku ọsọsọ" ma pịa na keyboard ihe nchịkọta dị mkpa achọrọ, dịka ọmụmaatụ, "CTRL ALT T". Wee pịa "Tinye" ma "OK"iji zọpụta mgbanwe ma mechie windo Njirimara.
Mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ị mụtara banyere ụzọ niile dị ugbu a "Iwu iwu" na Windows 10 na ikike onye nchịkwa, nakwa otu esi eme ngwa ngwa, ma ọ bụrụ na ị na-ejikarị ngwa ọrụ a.